Shirkadda Diyaaradda Central Air oo ka mid ah Shirkadaha adeegyada Bulshada ka Fuliya Gudaha Dalka kana mid ah Shirkadihii dhawaan ka hawl bilaabay Duulimaadyada Gudaha ayaa durbaba waxa ay kasbatay Macaamiil fara badan.Shirkaddan oo ay u shaqayso Hal Diyaarad ayaa waxa ay safaro ku tagtaa qaybo ka mid ah Gobolada dalka sida gobolada dhaca Koofurta iyo Bartamaha Soomaaliya taasoo Todobaadkii samaysa illaa Afar Duulimaad oo Gobolada dalka ah.
Shirkadda oo hawl gashay Dabayaaqadii Sanadkii aynu soo dhaafnay ayaa durbaba waxa ay la kulantay kufaa Kac iyadoona dhowr mar oo kala duwan ay ku yimaadeen baaqashooyin ku dhacay safaro ay hore u qoondeysey ka gadaal markii ay sheegteen Cudur daaro dhowr ah.
Shirakadda Central Air ayaa waxa maalin walba oo Isniin ah ay sameysaa Duulimaad Muqdisho Baydhaba Baydhaba Muqdisho ah iyo Muqdisha ka qaada Rakaab u badan Dad dhinaca Qurbaha ka yimid kuwaasoo dhibsanayay maritaanka Wadada Isku Xirta Muqdisho iyo Baydhabo ee dhinaca Dhulka ah ka gadaal markii dhibaatooyin kala duwan laga sheegay.
Shirkadda Centaral Air ayaa muddo gaaban ku kasbatay Macaash fara badan iyo Macaamiil si joogta u adeegsada Diyaaradaas kuna xisaabtama Duulimaadka ay ku tagto Magaalada Baydhabo halkaasoo soo noqodkeeduna ay ka soo rarto Badeecooyin u badan Tubaakada oo dakhli fara badan uu ka soo galo.
Shirkadda ayaa iminka u muuqanaysa mid sii luminaysa Kalsoonida Macaamiisheeda sida ay noo sheegeen qaar ka mid ah Rakaab maanta ku qornaa oo markii ay Airborka Muqdisho yimaadeen loo sheegay in safarkii Diyaaraddaasu uu Maanta baaqday hase yeeshee uu baxayo maalinta Berri ah.
Laba ka mid ah Rakaabkaas oo aan kula kulmay Garoonka Diyaaradaha caalamiga ee Magaalada Muqdisho xilli ay dib ugu laabanayeen Degaanadooda ayaa ka gaabsaday in Magacooda Saxaafdda loo adeegsado iyadoona wajiyadooda laga dheehan karay Caro aad u fara badan oo ay u hayaan Shirkadda iyo maamulkeeda.
Mid ka mid ah Dadkii aan la kulmay ayaa farta ku goday in tani la yaab aysan ahayn balse marar hore oo badan sidan oo kale ay dhacday isagoona intaa sii raaciyay haddii shirkaddu sidan ay ku sii socoto in ay waayin doonto macaamiil fara badan.
Xiriir aan la samaynayay si aan wax badan uga ogaano falalkan shirkadda ku soo noq noqday ayaanay noo suurta gelin inaan dhinaca khadka ku helno. Si kastaba ma aha markii u horeeyay oo Safar Diyaaradda Centaral Air ah uu baaqdo iyadoo ayna isa soo tarayaanCabashada ka soo yeereysa macaamiisha Shirkaddaas oo waayadan dambe aan la dhacsanayn dhaqanadan ay la soo soo baxday Shirkadda .
Faafin: SomaliTalk.com | March 12, 2013